Momba anay - Dongguan Sheerfond New Material Co., Ltd.
Dongguan Sheerfond New Material Co., Ltd dia mifantoka amin'ny fampandrosoana sy ny famokarana vokatra vaovao. Ny vokatra lehibe indrindra dia ny akora graphene sy ny vokatra fampiharana, ny birao sy ny vokatra an-trano ary ny fanomezana. Ny tanjontsika dia ny "teknolojia ho an'ny fiainana". Ny tombotsoantsika:
1. Ny fahaizan'ny fampandrosoana ny vokatra matihanina: manomboka amin'ny fivoarana ara-materialy, ny endrika endriny, ny famolavolana ny mekanika, ny fampandrosoana ny bobongolo, ny famolavolana sy ny fampandrosoana ny vokatra tokana, ahodino ho lasa vokatra tsara ny hevitrao ary tanteraho ny nofinao.
2. Fahaiza-manao famokarana matanjaka: ny fahaizan'ny famokarana isam-bolana dia mahatratra 100 tapitrisa metatra.
3. Fanaraha-maso ny kalitao henjana: manomboka amin'ny fametrahana fenitra fitsapana, fanaraha-maso fitaovana miditra, fanaraha-maso ny famokarana ary fanaraha-maso ivelany, fanaraha-maso 100% no azo antoka hahazoana antoka fa ny vokatra rehetra raisin'ny mpanjifa dia vokatra mahay.
4. Serivisy mahafa-po ny mpanjifa, ny filan'ny mpanjifa no ilainay, ny serivisy ho an'ny mpanjifa tsara no andraikitray, na ny fampiroboroboana ny vokatra, ny kalitaon'ny vokatra, ny baiko ary ny olana hafa, azafady mba lazao anay amin'ny fotoana voalohany, hiasa hatrany izahay hahatratra anao fahafaham-po. 5. Vidim-bola mahomby, orinasa izahay, tsy mitady afa-tsy tombony ara-dalàna, avelao ny vokatra hanan-tombony bebe kokoa eo amin'ny tsena, hivarotra bebe kokoa, ny mpiara-miasa amiko dia hahita fahombiazana bebe kokoa.
Manoloana ireo mpiara-miombon'antoka maro, ahoana no safidintsika? Tsy maintsy misafidy ireo mpiara-miombon'antoka izay manavao tsy tapaka, manao fandrosoana ary mitondra vokatra sy serivisy vaovao ho an'ny mpanjifa isika mba hahafahantsika mandroso sy mivoatra miaraka. manantena ny mombamomba anao.
Misy fomba fiaraha-miasa 3:
1. Ireo mpanjifa dia mametraka ny fepetra takiana, hevitra tsara, hamorona vokatra tsara izahay.
2. Ny mpanjifa dia manamboatra ny vokatra efa misy ary mampanjifa vokatra izay novokarina betsaka hamaly haingana ny filan'ny mpanjifa.
3. Mila mitady mpiara-miasa amin'ny faritra ianao. Manantena aho fa afaka miara-miasa aminay amin'ny faritra nofidinao ianareo, hampitombo ny tsena ho lehibe kokoa ary hiaro ny faritra voafantina. Ianao irery no safidinay.